GBNF in 2018 – HlaMin
GBNF in 2018
Darren Lee (M62, USA)
Daw Khin Htwe Yi (M86) : 6th Jan 2018
U Maung Maung Swe : Jan 2018
U Than Naing (Saya Gyi) : 29th Jan 2018
U Maung Maung Than (M) : 8th Jul 2018
Saya H Num Kok (C, USA) : 12th Jul 2018
U Cho Aye (M70) : 7th Aug 2018
U Thein Htun (M) : 29th Aug 2018
Victor Win (Nay Win Myint, ChE66)
U Tint Swe, U Nay Win Myint, U Maung Maung
U Victor Win (အသက် ၇၅နှစ်)
Former President and Former Board Vice Chairman (2004 to 2006)
Burma American Democratic Alliance (BADA)ကို တည်ထောင်သူ
U Victor Win ၊ Daw Jean Gale ( Former President of BADA ) ၏ ခင်ပွန်းသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃)ရက်နေ့ ည (၉း၃၄)နာရီ တွင် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလပ်ကို
(a) ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ သရဏဂုံ တင်ခြင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)
ညနေ ( ၄း၃၀) PM မှ (၅း၀၀) PM
(b) ခရစ်ယာန် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ
၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့( သောကြာနေ့)
ညနေ ၅း၀၀ PM မှ ၇း၀၀ PM
(viewing) Duggan’s Serra Mortuary, 500 Westlake Ave, Daly City, CA-94014.
(2) Burial မြေမြှပ် သင်ဂြိုလ်ခြင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၁)ရက် (စနေနေ့) ၉း၀၀ AM to ၁၂း ၀၀ PM
(Funeral mass) St. Andrew Church, 1571 Southgate Ave, Daly City, CA-94015
(Funeral) Holy Cross Cemetery, 1500 Mission Road, Colma, CA-94014
Daw Khin Than Win (T70) : 3rd Sep 2018
U Kyaw Min Than
U Kyaw Min Than is the younger brother of Saya Dr. U Win (USA).
ဦးဝင်း (USA)၊ ဦးသန်းကြူ (၇န်ကုန်)၊ တို့ဇ။် ညီ ဖြစ်သူ၊ ဒေါ်မြမြသန်း (USA)၊ ဦးအေးသန်း (၇န်ကုန်)၊ ဦးထွေးသန်း (၇န်ကုန်) တို့ဇ။် အစ်ကိုဖြစ်သူဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဟောင်း ဦးကျော်မင်းသန်း (၆၂ နှစ်) သ ည် ပြင်ဦးလွင်မြို့ စစ်ဆေးရုံ တွင် ၉-၂၂-၂၀၁၈ ည ၈:၃၀ နာ၇ီ တွင် နှလုံးေ၇ာ၈ါဖြင့် ကွယ်လွန်သွား ပါသဖြင့် ညီငယ် ကောင်း၇ာ သု၈တိ သို့ လားပါစေသောဝ်။
U Aye Kyaw : 12th Oct 2018
Khin Maung Than wrote :
RIT (65>>71) batch Electrical မှဦးအေးကျော် ကွယ်လွန်ကြောင်းကြားသိရပါသည်။ စိန်ပေါ်(လ်)ကျောင်းသားဟောင်းတဦးပါ ။1965 Matric ဖြစ်ပြီး အများက UN ဦးသန့် နှင့်ဆင်၍ ဦးသန့်ဟုပင်စနောက်ခဲ့ကြပါသည်။စိန်လျှံသို့လာလေ့မရှိပါ။ အများသိစေရန်အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုအေးကျော် ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ။
U Aye Kyaw (GBNF)
U Hla Moe (U Kyin Sein, Phy) : 4th Nov 2018
U Khin Kyaw (SPHS 70/EP 76/ex-YCDC) : 18th Dec 2018
Dr. Daw Kyin Yee, spouse of Saya U Kyaw Myint (M64) : Dec 2018
Myanmar Community in SF Bay Area
Two members from the Myanmar Community in the San Francisco Bay Area lost their beloved ones.
Ms. Yasmin Vanya, Secretary of Burmese American Women’s Alliance (BAWA), lost her beloved mother. Yasmin isacousin of Saya Bilal Raschid (C56, Architect).
U Maung Maung Latt, President of Burmese American Democratic Alliance (BADA) lost his beloved wife. He was elected as MP of Beelin Constituency in the 1990 elections.